जनावरको चिन्ह 666 - येशू ख्रीष्टको प्रकाश
मे १९, २०२२ मे ३, २०१९ द्वारा प्रकाशक
मैले यो विषयलाई पनि कभर गरेको छु प्रकाशका जनावरहरूको बारेमा पहिले धेरै पोस्टहरू.
जनावर 666 को चिन्ह के हो?
यो चिन्हले मुक्ति नपाएका मानिसको आध्यात्मिक अवस्था, र सामान्यतया मुक्ति नपाएको मानवजातिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्तिको शक्तिद्वारा तिनीहरूको आत्मा र आत्माको मुक्ति बिना मानिसहरूलाई धर्मशास्त्रमा जनावरसँग तुलना गरिएको छ। जब यो आध्यात्मिक चीजहरूको कुरा आउँछ: तिनीहरू पशु जस्तै बुझ्छन्, तिनीहरू पशु जस्तै स्वार्थी जीवन बिताउँछन्, र तिनीहरूसँग जनावरको जस्तै अनन्त जवाफदेहिताप्रति कुनै विवेक छैन। त्यसैले शैतानले मानिसहरूलाई पशु आत्माको भ्रामक शक्तिहरूको अधीनमा राख्न मन पराउँछ, जुन तिनीहरूमा उसको "चिह्न" हो।
प्रकाश १३ को पहिलो जनावरले केलाई जनाउँछ?
पहिलो जनावरले प्रतिनिधित्व गर्यो ईसाई धर्मको पतित अवस्था, जब यो रोमन क्याथोलिक चर्चमा परिणत भयो। पगन रोम, वा पहिलो दुई शताब्दीको आध्यात्मिक ड्र्यागन शक्तिले रोमन क्याथोलिक चर्चलाई यो विश्वव्यापी, वा क्याथोलिक शक्ति र अधिकार क्षेत्र दियो।
प्रकाश १३ को दोस्रो जनावरले केलाई जनाउँछ?
दोस्रो जनावर हामीलाई प्रकाश 13:11-15 मा परिचय गराइएको थियो। यो जनावर भेडाको थुमा जस्तो देखिन्थ्यो, तर शैतानको शक्तिद्वारा बोल्यो र धोका दियो। यो दोस्रो जनावरले सुधारको समयमा भएको पतित अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जब प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायहरूले रोमन क्याथोलिक चर्च जस्तै समान भावनाको साथ आफूलाई बनाउन र आचरण गर्न थाले।
आध्यात्मिक रूपमा, दोस्रो जनावर वास्तवमा एक संक्रमणकालीन प्राणी थियो: पहिलो जनावरलाई आफ्नो छवि मार्फत आफ्नो जीवन जारी राख्न सक्षम बनाउँदै। क्याथोलिक चर्च सार्वभौमिक हुने उद्देश्य थियो। र त्यसैगरी, जनावरको छवि विश्वव्यापी हुनको लागि हो। त्यसकारण यो दोस्रो भेडाको थुमाले यो तेस्रोलाई जीवन दिन सक्यो: जनावरको छवि। आखिर, यो प्रोटेस्टेन्टवादको प्रभावमा रहेका देशहरू र मानिसहरू थिए जसले चर्चहरूको विश्व परिषद र संयुक्त राष्ट्र दुवैलाई जीवन दिएको छ। र दुवै एक सार्वभौमिक, वा क्याथोलिक अधिकार क्षेत्रको उद्देश्य हो।
के तपाईंले कहिल्यै याद गर्नुभएको छ कि अब, जहिले पनि पोपको मृत्यु हुन्छ, लगभग सबै राष्ट्रका प्रमुख नेतृत्वहरू त्यो पोपलाई श्रद्धाञ्जली दिन आउँछन्? क्याथोलिक भनेको सार्वभौमिक हो, र यो विश्वव्यापी शक्ति र प्रभावको साथ पहिलो जनावर थियो। त्यसैले यो केवल तार्किक छ कि यस संगठनको आत्माले आफ्ना सबै विषयहरूलाई यही पशु प्रकृतिको साथ चिन्ह लगाउन चाहन्छ। आखिर, मानिसहरूलाई शैतानको छलमा राख्ने एक मात्र तरिका, तिनीहरूलाई परमेश्वरको साँचो स्वरूपबाट टाढा राख्नु हो, जुन प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ!
"अदृश्‍य परमेश्‍वरको प्रतिरूप, हरेक प्राणीको जेठो, उहाँद्वारा नै सृष्‍टि गरिएको हो, जो स्वर्गमा छन्, र पृथ्वीमा छन्, दृश्‍य र अदृश्‍य छन्, चाहे ती सिंहासन होस्, वा आधिपत्य, वा राज्यहरू, वा शक्तिहरू: सबै चीजहरू उहाँद्वारा र उहाँकै लागि सृष्टि गरिएका हुन्” ~ कलस्सी १:१५-१६
जनावरको छविको उद्देश्य के हो?
शैतानको काम भनेको मानिसहरूलाई तिनीहरूको दिमाग र हृदयमा सिद्धान्त जस्तो जनावर र सङ्गति जस्तो जनावरले चिन्ह लगाउनु हो। केहि चीज जसले मानिसहरूलाई जनावरको छविमा राख्छ।
"तर यदि हाम्रो सुसमाचार लुकाइएको छ भने, यो हराउनेहरूका लागि लुकाइएको छ: जसमा यस संसारको देवताले विश्वास नगर्नेहरूको दिमागलाई अन्धा पारिदिएको छ, नत्रता ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति, जो परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ। तिनीहरूसामु चम्कनुपर्छ।” ~ २ कोरिन्थी ४:३-४
र यसैले अर्को प्रकाशमा हामी देख्छौं कि दोस्रो जनावरको शक्तिले मानिसहरूलाई यो छलको चिन्ह लगाउन काम गरिरहेको छ।
"अनि उहाँले साना र ठूला, धनी र गरिब, स्वतन्त्र र बन्धन सबैलाई तिनीहरूको दाहिने हातमा वा तिनीहरूको निधारमा छाप लगाउनु हुन्छ" ~ प्रकाश १३:१६
दाहिने हात वा निधारमा किन हुन्छ पशुको चिन्ह ?
सबैजना अन्ततः गलत विश्वास वा झूटो संगति द्वारा चिन्हित हुन्छन्। यो केवल येशू ख्रीष्टको मुक्ति शक्ति मार्फत हो कि हामीले यो चिन्ह हटाउन सक्छौं। र एक पटक त्यो चिन्ह हटाइएपछि, हामीले अचानक फेला पार्नेछौं कि हामी आध्यात्मिक रूपमा अब जनावरको राज्यको विषय होइनौं (हामी पृथ्वीमा कुनै देशको नागरिक भए तापनि।)
त्यसोभए अब हामी जनावरको राज्यको भाग होइनौं, हामी अब जनावरलाई माया गर्नेहरूले पनि स्वागत गर्दैनौं, जनावरको राज्यका मानिसहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा साँचो धन खोज्न मनाउन प्रयास गर्न।
“जसलाई परमेश्वरले अन्यजातिहरूमाझ यस रहस्यको महिमाको धन के हो भनेर बताउनुहुनेछ; जो तिमीहरूमा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, महिमाको आशा” ~ कलस्सी १:२७
यो के हो कि प्रकाशको जनावरले साँचो मसीहीहरूलाई "किन्ने र बेच्न" बाट जोगाउन चाहन्छ?
शैतानले मानिसहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। त्यसैले मानिसहरूलाई ख्रीष्टमा साँचो धन र स्वतन्त्रताबाट जोगाउन, विश्वव्यापी जनावरले येशू ख्रीष्टको साँचो सुसमाचार प्रचार गर्न, साँचो सन्तहरूको क्षमतालाई सीमित गर्न खोज्छ।
"अनि कुनै पनि मानिसले किन्न वा बेच्न नपरोस्, त्यो बाहेक जोसँग चिन्ह थियो, वा जनावरको नाम, वा उसको नामको संख्या।" ~ प्रकाश १३:१७
धेरै वर्षदेखि, एक प्रचारकलाई कुनै पनि सम्प्रदायिक चर्चमा प्रचार गर्न अनुमति दिइने छैन, जबसम्म उसलाई विशेष नेतृत्व निकाय र तिनीहरूको सिद्धान्तले अनुमोदन नगरेको थियो। परमेश्‍वरले त्यस व्यक्तिलाई प्रचार गर्न बोलाउनुभएको हो कि होइन त्यो सम्प्रदायसँग अप्रासंगिक छ। वास्तवमा, तिनीहरूले पवित्र आत्मा अभिषिक्त प्रचारकलाई प्रचार गर्न कहिल्यै अनुमति दिने छैनन्। किनभने पवित्र आत्माले तिनीहरूका झूटा सिद्धान्तहरू र तिनीहरूको झूटो संगतिको चिन्हलाई सुधार्नुहुनेछ।
साँचो मसीही संगति के हो?
साँचो सङ्गति येशू ख्रीष्ट मार्फत परमेश्वरसँग पहिलो हुन्छ, जब उहाँले एक आत्मालाई परमेश्वरको आज्ञाकारी जीवनको लागि पापबाट बचाउनु हुन्छ। जब हामी पहिलो पटक परमेश्वरसँग सङ्गति राख्छौं, तब हामी एकअर्कासँग सङ्गति गर्न सक्छौं।
"यदि हामी उहाँसँग सङ्गति राख्छौं, र अन्धकारमा हिंड्छौं भने, हामी झूट बोल्छौं, र सत्य गर्दैनौं: तर यदि हामी ज्योतिमा हिँड्छौं, जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ, हाम्रो एक-अर्कासँग सङ्गति छ, र रगत। उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध गर्नुहुन्छ। ” ~ १ यूहन्ना १:६-७
साँचो परमेश्‍वरको प्रचारकले परमेश्‍वरको वचनले सिकाउने कुरा बाहेक अरू केही प्रचार गर्दैन। त्यसकारण त्यो प्रचार, र केवल बाइबल र पवित्र आत्माको नेतृत्वमा आधारित फेलोशिप, जनावरद्वारा चिन्ह लगाइएकाहरूले कहिल्यै स्वीकार गर्दैनन्।
“अनि कुनै मानिसले किन्न वा बेच्न नपरोस्, त्यो बाहेक जोसँग चिन्ह थियो, वा जनावरको नाम, वा उसको नामको संख्या। यहाँ बुद्धि छ। जसको समझ छ उसले पशुको संख्या गनोस्, किनकि यो मानिसको संख्या हो। र उनको संख्या छ सय सत्तरी छ ।" ~ प्रकाश १३:१७-१८
मैले पहिले नै बोलेको चिन्ह। जनावरको नाम (वा पहिचान) ईश्वरनिन्दा वा अनादरको नाम हो: रोमन क्याथोलिक (सार्वभौमिक) चर्च।
तर धर्मशास्त्रले यो पनि बताउँछ: "उसको नामको संख्या।"
प्रकाशले किन जनावरको बारेमा भन्छ: "उसको नामको संख्या"?
कसै-कसैले भनेका छन् कि यसले विभिन्न सिद्धान्तहरू र फेलोशिपहरूको धेरै पहिचानहरू समावेश गर्दछ जुन मानिसहरूले सदस्यता लिएका छन्। र यो पक्कै पनि गर्छ। (यदि तपाईंले ख्रीष्ट र उहाँको क्रसको साथ पहिचान गर्न आफैलाई नम्र गर्नुभएन भने, अर्को धार्मिक पहिचान निश्चित रूपमा तपाइँको लागि छनोट गरिनेछ।) तर त्यहाँ अझ गहिरो अर्थ छ प्रभुले हामीले जनावरको नामको संख्याको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ। उहाँ चाहानुहुन्छ कि हामीले अन्तर्निहित मानसिकता बुझेको छ जसले मानिसहरूलाई धोका दिन्छ, र त्यो पहिचानद्वारा चिन्हित बनाइन्छ। र त्यसैले उसले हामीलाई त्यो पहिचानको संख्या 666 बताउँछ।
किन जनावरको संख्या 666 बराबर छ?
666 नम्बर रोज्नुमा प्रभुसँग धेरै विशिष्ट कारण छ। र उहाँले हामीलाई बताउनुहुन्छ कि यो जनावरको संख्या र मानिसको संख्या हो। यो एउटा चिन्ह हो जसले मानिसलाई आत्मिक कुराहरूको बुझाइमा पशुको बराबर र उसको सङ्गतिमा जनावरको बराबर बनाउँछ। त्यसकारण यो पशु चिन्हको साथ, एक व्यक्तिले "क्रिस्चियन" भनी दाबी गर्ने मानिसहरूलाई फेलोशिप गर्नेछ तर तिनीहरू आफ्नो हृदयमा "पृथ्वी, कामुक र शैतानी" छन्। तिनीहरू कामना गर्छन्, इच्छा गर्छन्, र जनावरको जस्तै शरीरको चाहनाहरू पछि जान्छन्। त्यसैले तिनीहरूको "क्रिस्चियन फेलोशिप" पनि धेरै शारीरिक वा शारीरिक छ। वास्तवमा बाबाको इच्छा पूरा गर्नुसँग यसको धेरै कम सम्बन्ध छ।
मानिस = पशु = 666 (भजन 49:20 पनि हेर्नुहोस्)
पशुको चिन्हको बारेमा बताउने शास्त्रहरू फेरि पढौं:
दाहिने हातमा जनावरको चिन्ह के हो?
दाहिने हात सङ्गतिको प्रतीक हो।
"अनि जब याकूब, केफास र जोन, जो स्तम्भहरू देखिन्थे, मलाई दिइएको अनुग्रह बुझे, तिनीहरूले मलाई र बर्णाबासलाई दिए। फेलोशिपको दाहिने हात; कि हामी अन्यजातिहरूकहाँ जानुपर्छ, र तिनीहरू खतनामा जानुपर्छ।” ~ गलाती २:९
तसर्थ दाहिने हातमा पशुको चिन्ह पशु-जस्तो (भगवान-जस्तैको सट्टा) संगतिको चिन्ह हो।
निधारमा पशुको चिन्ह के हो?
निधारमा चिन्हले व्यक्तिको तर्क र समझमा चिन्ह लगाइएको देखाउँछ। तिनीहरू तर्क गर्दैनन् र भगवान जस्तै सोच्छन्। तिनीहरूसँग ख्रीष्टको दिमाग छैन। फलस्वरूप, तिनीहरू तर्क गर्छन् र शारीरिक रूपमा सोच्छन्, जनावर जस्तै।
"किनकि प्रभुको मन कसले जान्‍छ, कि उहाँले उहाँलाई निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ? तर हामीसँग ख्रीष्टको मन छ।" ~ १ कोरिन्थी २:१६
तर यो चिन्हलाई पूर्णतया बुझ्नको लागि, हामीले बेबिलोनका राजाहरूको मानसिकताको बारेमा धर्मशास्त्रलाई मात्र होइन, तर पुरातन बेबिलोनसँग सम्बन्धित पुरानो इतिहासलाई पनि जाँच्न समय निकाल्नुपर्छ। किनभने शैतानको भ्रामक आत्मा जसले त्यसबेला मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा राखेको थियो, त्यही आत्माले आज मानिसहरूलाई धोका दिन्छ। यसैले प्रभुले प्रकाशमा बेबिलोनको यो आत्मालाई शैतानको छलको प्रमुख आत्माको रूपमा चिनाउनुहुन्छ, जसलाई परास्त गर्नुपर्छ, मानिसहरूलाई साँच्चै मुक्त गर्न।
बेबिलोन भ्रम को प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो नाम पुरानो नियमको प्रारम्भमा उत्पत्ति भएको थियो जब मानिसहरूले स्वर्गमा पुग्न र आफ्नो आत्मिक पहिचान बनाउनको लागि आफ्नै टावर (उत्पत्ति 11) निर्माण गर्न थाले। परमेश्वरको सेवा गर्ने तिनीहरूको आफ्नै तरिका थियो। (र अनिवार्य रूपमा आज बेबिलोनले प्रतिनिधित्व गर्दछ: मानिस, जसले एक पटक परमेश्वरलाई चिनेको थियो, परमेश्वरको सेवा गर्ने आफ्नै तरिका सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दै।) तर पुरानो नियममा परमेश्वरले तिनीहरूको भाषा र सहमत हुने क्षमतालाई भ्रमित गर्नुभयो, जसले गर्दा तिनीहरूको टावरको निर्माण असफल भयो। र मानिसहरू विभाजित भए। र आज पनि यो सत्य हो: परमेश्वरले फेरि क्रिश्चियन भएको दाबी गर्नेहरूका बीचमा भ्रम पठाउनुभएको छ जसले आफ्नै मार्गहरू निर्माण गरिरहेका छन्, र फलस्वरूप परमेश्वरले तिनीहरूलाई धेरै पटक विभाजित गर्नुभएको छ।
त्यसोभए हामी यस आध्यात्मिक संख्या 666 को अर्थलाई अझ नजिकबाट हेरौं।
के 666 आध्यात्मिक संख्या हो?
आध्यात्मिक संख्याको रूपमा, र शाब्दिक होइन, 666 ले "तौलिएको र अभाव भएको" सङ्ख्यालाई जनाउँछ। यो एक आध्यात्मिक अवस्था हो कि जब परमेश्वरको वचनको बिरूद्ध सन्तुलनमा तौलिन्छ, यो छोटो हुन्छ। यो चिन्ह भएका मानिसहरूले परमेश्वरको छविलाई पूर्ण रूपमा मापन गर्दैनन्: जुन येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।
परमेश्वरको साँचो छवि हो जब तपाईंका सबै पापहरू क्षमा गरिसकेपछि, तपाईंले आफ्नो सम्पूर्ण हृदय र जीवन येशू ख्रीष्टमा समर्पित गर्नुहुन्छ। तब तपाईंले पवित्र आत्मा भरेर परमेश्वरको दिव्य प्रकृति प्राप्त गर्नुहुनेछ।
साँचो ईश्वरीय प्रकृतिले भित्र शासन गरिरहेको छ, तपाईंसँग जनावरको संख्या के हो भनेर बुझ्न आवश्यक आध्यात्मिक ज्ञान हुनेछ। बुद्धिविहीन, त्यो हो जसले आफ्नो आध्यात्मिक जीवनलाई मानिस र मानिसको बुद्धिसँग तुलना गरेर वजन गर्छ। यसैले क्रिस्चियनहरूलाई यो भ्रामक बुद्धिमा भर पर्ने संख्याको हिस्सा हुन विरुद्ध चेतावनी दिइएको छ।
"किनकि हामी आफैंलाई संख्याको आधारमा बनाउने हिम्मत गर्दैनौं, वा आफैलाई प्रशंसा गर्ने कसैसँग तुलना गर्ने साहस गर्दैनौं: तर तिनीहरू आफैले आफैलाई नाप्ने, र आफूलाई आपसमा तुलना गर्ने, बुद्धिमानी होइनन्।" ~ २ कोरिन्थी १०:१२
पशु स्वभाव भएकाहरूले आफूलाई अरूसँग तुलना गरेर आफ्नो आध्यात्मिकतालाई तौल्छन्। तर पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको स्वरूप भएकाहरूले आफूलाई परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको आत्माद्वारा तौल्छन्। यसले तपाईंलाई परमेश्वरको अगाडि तपाईंको आध्यात्मिकताको सही विवरण दिनेछ।
"तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई उहाँको आत्माद्वारा हामीसामु प्रकट गर्नुभएको छ: किनकि आत्माले सबै कुराहरू, हो, परमेश्वरका गहिरा कुराहरू खोज्नुहुन्छ। किनकी मानिसमा भएको मानिसको आत्मा बाहेक मानिसको कुरा के थाहा हुन्छ? त्यसरी नै परमेश्‍वरका कुराहरू कसैले जान्‍दैन, तर परमेश्‍वरका आत्‍माले।” ~ १ कोरिन्थी २:१०-११
परमेश्वरले पहाड र पहाडहरूलाई आफ्नो हातको तराजू र तराजूमा नाप्नु हुन्छ (यशैया ४०:१२ हेर्नुहोस्)। त्यसैले परमेश्वरले पनि आफ्नो वचनको सन्तुलन विरुद्ध धर्मको पहाड र पहाडलाई तराजूमा नाप्नु हुन्छ।
र उसले ती सन्तुलनहरूमा व्यक्तिहरूलाई पनि तौल्छ।
पुरानो नियममा, जब बेबिलोनका राजा, बेलसजरले सोचेका थिए कि उसले परमेश्वरको आराधनाको घरका भाँडाहरू लिन सक्छ, र तिनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थी र अधर्मी मूर्तिपूजा पार्टीको भागको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ: भित्तामा हस्तलेखनले उसको अन्तिम निर्णयलाई पहिचान गर्‍यो। आउनुहोस्।
“तिनीहरूले दाखरस पिए, र सुन, चाँदी, काँसा, फलाम, काठ र ढुङ्गाका देवताहरूको प्रशंसा गरे। त्यही घडीमा एक जना मानिसको हातका औंलाहरू निस्के, र राजाको दरबारको पर्खालको प्लास्टरमा मैनबत्तीको विरुद्धमा लेखे: र राजाले लेखेको हातको भाग देखे। ~ दानियल ५:४-५
अगमवक्ता दानियलले बेबिलोनको विरुद्धमा भएको न्यायको बारेमा बताउन गए। र न्याय अन्तिम थियो किनभने बेबिलोनका बुबा, नबूकदनेसरका राजा, उहाँ केवल एक जनावर हुनुहुन्छ भनी परमेश्वरले देखाइसक्नु भएको थियो। (दानियल अध्याय4मा उहाँलाई साँच्चै जनावरको रूपमा चिन्ह लगाइएको थियो।) र राजा बेलसजरलाई आफ्नो बुबालाई के भयो भनेर सबै थाहा थियो।
दानियलको चौथो अध्यायमा, नबूकदनेसरलाई आफ्नो दिमाग गुमाउन र जनावर जस्तै बन्न र आफ्नो घमण्डको कारण धेरै वर्षसम्म पशु जस्तै जीवन बिताउन परमेश्वरद्वारा नम्र बनाइएको थियो। तब परमेश्वरले नबूकदनेसरलाई दया गर्नुभयो। र राजाले स्वीकार गरे कि परमेश्वर पृथ्वीका सबै राजाहरूमाथि सार्वभौम हुनुहुन्छ।
तर बेलसजरलाई परमेश्‍वरले आफ्नो बुबालाई के देखाउनुभएको थियो भनी थाह भए तापनि तिनले सर्वशक्तिमान परमेश्‍वरप्रति पूर्ण अनादर देखाए। त्यसैले अब दानियलले बेलसजरलाई यस्तो अनादरको लागि आफ्नो अन्तिम विनाश बताए। बेबिलोनको राज्य गनिएको थियो (ध्यान दिनुहोस् कि यो प्रकाश - 666 मा पनि नम्बर गरिएको छ) र कि राजा आफैंलाई परमेश्वरको तराजूमा तौलिएको थियो, र उनी दुखी रूपमा अभावमा माथि आए!
"र यो लेखिएको थियो, मेने, मेने, टेकेल, उफरसिन। यो कुराको व्याख्या हो: MENE ; भगवानसँग छ तिम्रो राज्य गनियो, र समाप्त भयो। TEKEL; तिमी तराजुमा तौलिएका छौ, अनि अभावमा पाइन्छ। पेरेस; तिम्रो राज्य विभाजित भएको छ, र मेडीज र फारसीहरूलाई दिइएको छ।" ~ दानियल ५:२५-२८
नोट: पछि प्रकाश 16 मा, आध्यात्मिक बेबिलोनलाई उनको विरुद्धमा परमेश्वरको न्यायको भागको रूपमा तीन भागमा विभाजन गरिएको छ।
पशु मानसिकता धर्मको मानसिकता मार्फत, मानिसले अब मानिसको आफ्नै जनावरको छविमा ईश्वरलाई कम गर्न तीन पटक बोलेको छ। भगवानको आराधना गर्ने यस जिद्दी पशु दिमागको लागि कुनै दया छैन:
पहिलो जनावर - रोमन क्याथोलिक धर्म
दोस्रो जनावर - प्रोटेस्टेन्टवाद
तेस्रो जनावर (जन्तुको छवि) - विश्व परिषद चर्चहरू/संयुक्त राष्ट्रहरू
यी तीन जन्तुहरूद्वारा मानिसले अन्तिम पटक भगवानलाई रिसाएको छ!
आज मानिसले (आफूलाई परमेश्वरको सेवक भनी दाबी गर्ने जो कोही पनि) परमेश्वरको पहिचान र उहाँको कामलाई आफ्नै समझको सानो बाकसमा सीमित गर्ने प्रयास छोड्ने समय आएको छ! बरु एक मन्त्रीलाई सच्चा समझ र संख्या, वा सीमाहरू, मानिस जस्तै जनावरको गणना गर्न आवश्यक छ। तर परमेश्‍वरको पूर्णतालाई जोड्ने हिम्मत नगर्नुहोस्, न त उहाँलाई कसरी काम गर्ने अनुमति दिइएको छ भनी बताउनुहोस्!
"यहाँ बुद्धि छ। जसको समझ छ उसले पशुको संख्या गनोस्, किनकि यो मानिसको संख्या हो। र उनको संख्या छ सय सत्तरी छ ।" ~ प्रकाश १३:१८
हामी हाम्रो पूजाको रूपलाई कहिल्यै नपुजाऔं, न कुनै पूजा गर्ने नेता। हामीलाई स्पष्ट रूपमा बारम्बार चेतावनी दिइएको छ "परमेश्वरको आराधना गर्नुहोस्!" नत्र हामी जनावरको चिन्ह बन्नेछौं, किनकि हामी केवल धर्मको प्रणाली, वा मानिस, वा दुवैलाई श्रद्धांजलि दिन्छौं! यूहन्नाले मानव स्वर्गदूत / सन्देशवाहकहरू मध्ये एकको उपासना गर्ने प्रयास गरेपछि प्रकाशको चेतावनी थियो:
"...हेर नगर्नुहोस्: किनकि म तिम्रा सहकर्मी हुँ, र तिम्रा भाइहरू अगमवक्ताहरू र यस पुस्तकका भनाइहरू पालन गर्नेहरूमध्ये: परमेश्वरको आराधना गर्नुहोस्।" ~ प्रकाश २२:९
केवल भगवान को पूजा! जब तपाइँ ईश्वरको आज्ञाकारिता भन्दा पहिले धार्मिक प्रणालीको आज्ञाकारिता राख्नुहुन्छ, तपाइँ त्यो प्रणालीको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। तिमी पशु वा उसको मूर्तिको पूजा गर्दैछौ। जब तपाइँ परमेश्वर र उहाँको वचन भन्दा बढी मानिसको आज्ञापालन गर्नुहुन्छ र अनुसरण गर्नुहुन्छ, तपाइँ एक जनावरको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ।
मानिसहरू कसरी जनावरद्वारा चिन्हित हुन्छन्?
प्रकाशमा जनावरको चिन्ह प्राप्त भएको छ मात्र जनावर वा उसको छविको "पूजा" पछि:
“यदि कुनै मानिसले जनावर र उसको मूर्तिको पूजा गर्छ, र उसको छाप पाउँछ। । । ” ~ प्रकाश १४:९
"। । । जसले पशु र उसको मूर्तिको पूजा गर्छ, र जसले चिन्ह प्राप्त गर्दछ। । । ” ~ प्रकाश १४:११
"। । जसमा पशुको छाप थियो, र उहाँको मूर्तिको पूजा गर्नेहरूमाथि। ~ प्रकाश १६:२
"। । । तिनीहरू जसले पशुको चिन्ह पाएका थिए, र उहाँको मूर्तिको पूजा गर्नेहरू। । ।" ~ प्रकाश १९:२०
"। । । जसले न पशुको पूजा गरेको थियो, न त उसको प्रतिमा, न त उसको छाप नै पाएको थियो। । ।" ~ प्रकाश २०:४
कुनै पनि धर्म प्रणालीको उपासना नगर्नुहोस्, चाहे यसलाई "क्रिश्चियन" भनिन्छ। कुनै पनि धर्म प्रचारकको पूजा नगर्नुहोस्, भले पनि उसले परमेश्वरको लागि महान कार्यहरू गरेको छ।
केवल भगवान को पूजा!
नोट: तलको यो रेखाचित्रले यो सातौं तुरही सन्देश पूर्ण प्रकाश सन्देश भित्र कहाँ छ भनेर देखाउँछ। जनावरको आत्माको चिन्ह7औं तुरही सन्देशको भागको रूपमा प्रकट गरिएको छ। प्रकाशको उच्च स्तरको दृष्टिकोणलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि, तपाईंले "प्रकाश को रोडमैप।"
कोटीहरू बेबिलोन, जनावर, झुटो चर्च, झूटो फेलोशिप, झुटो फैसला, झूटा शिक्षाहरु, झूटा पूजा, जनावर को छवि, प्रकाश १३, TrueBibleDoctrine ट्यागहरू 666, व्यभिचार, धोका, निधार, वेश्या, पाखण्ड, प्रोटेस्टेन्ट, रोमन क्याथोलिक पोस्ट नेभिगेसन
प्रकाशको जनावर र विरोधीको आत्मा